Fanomanana fifidianana: hanazava ireo didy aman-dalàna ny Ceni | NewsMada
Fanomanana fifidianana: hanazava ireo didy aman-dalàna ny Ceni
« Ny asa fanomanana ny fifidianana tanterahin’ny Ceni amin’izao, taorian’ny nivoahan’ny datim-pifidianana: voalohany sy goavana indrindra ny fitetezana an’i Madagasikara hampahafantarana sy hanazavana amin’ny antsipiriany ireo didy aman-dalàna vaovao hifehezana ny fifidianana. » , hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry. Amin’ny ankapobeny, mizotra tsara ny fiomanana teknika ary efa vonona avokoa ny lafiny vola ary efa manomboka mividy sy manafatra fitaovana ny Ceni amin’izao.
Hanombohana izay fanazavana didy aman-dalàna izay ny eto Antananarivo, anio, hamoriana ny mpanao politika sy ny firaisamonina sivily. Aorian’izay, hitety ireo distrika 119 ny Ceni sy ny mpiara-miombon’antoka aminy eo anivon’ny firaisamonina sivily. « Zava-dehibe ny tokony hahafantaran’ny olon-drehetra aloha ny fitsipi-dalao, ny zony sy ny adidy momba izany fifidianana eto Madagasikara izany », hoy izy.
Asa faharoa ataon’ny Ceni ny hamaranana ny isa sy ny lisitra ary ny toerana hisy ny biraom-pifidianana. Mahatratra 25 000 any ho any izany amin’izao. Hatao mangarahara ary hofaranana tanteraka tsy ho ela izany, ary hampahafantarina ny rehetra amin’ny alalan’ny peta-drindrina hahazoan’ny rehetra mijery sy manamarina azy.
Eo koa ny fanontana ny lisi-pifidianana farany, ny fahazoana ireo fitaovana ilaina amin’ny fifidianana. Farany ny fizoran’ny fiofanana isan-karazany ho fanamafisana ny fahaiza-manaon’ny rantsa-mangaika rehetra, ny fanofanana ireo mpikamban’ny birao fandatsaham-bato…
Hampahafantatra ny « logiciel » hampiasaina
Hiantso ny rehetra ny Ceni hampahafantatra sy hampiseho ampahibemaso ny rindram-baiko na « logiciel » hikirakirana ny manodidina ny fifidianana sy ny voka-pifidianana. Mba hahafantaran’ny rehetra amin’ny antsipiriany ny raharaha atao izay.
Eo koa ny fiomanana amin’ny fandraisana ireo solontena iray avy amin’ny kandidà tsirairay ho mpikambana eo anivon’ny Ceni, na eo amin’ny sehatra nasionaly izany na any amin’ny faritany, ny faritra, ny distrika, ny kaominina.